Indawo yemizi-mveliso yeRent eStrourbridge, eWest Midlands
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Indawo yemizi-mveliso I-West Midlands Isitayile
I-Bay 9 yeNdlu yaseMidland ibonelela ngendawo yokuhlala enendawo yokugcina izinto eneexabiso ezifanelekileyo ukusetyenziswa (stp). Ipropathi iyonke ingama-3,109 sq ft enokufikelelwa ngomnyango wabasebenzi okanye ngesitshixo esikhulu esirhuqwayo. Vula ishedyuli yesakhiwo i-3,109 sq ft kunye ne-mezzanine yokugcina i-circa 300 sq ft ...
Stourbridge in West Midlands, Dy9 8rd
Indawo iLye Valley Industrial Estate ibekwe kwisitalato i-Bromley eLye, ifikeleleke kwindlela i-A458 Stourbridge Road.Idlela 3 yendlela engu M5 imalunga neemayile ezine.IncwadiIeNdawo inezindlu ezingama-28 zecandelo lezemveliso / lokugcina izinto ezinobukhulu obahlukeneyo, ezinendawo zokupakisha nokulayisha phambili e. ...
umbono Indawo yemizi-mveliso ishicilelwe kwiinyanga 4 ezidlulileyo
IStrourbridge yidolophu yentengiso kwiWest Midlands County eNgilane. Imiswe kwi-River Stour, yayiliziko leBrithani elenza iglasi ngexesha lohlaziyo lwe-Industrial. Ubalo lwabantu base-UK lwe-2011 lurekhodile inani labemi bedolophu njenge63,298.